Samsung Galaxy Ace2I8160 ကို Master Reset to Factory Default / Reset / Pattern or PIN / Reinstall or Restore / Reset or Reboot ဖြေရှင်းနည်း | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
Samsung Galaxy Ace2I8160 ကို Master Reset to Factory Default / Reset / Pattern or PIN / Reinstall or Restore / Reset or Reboot ဖြေရှင်းနည်း
Posted on November 25, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)
အကူအညီတောင်းခံလာတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို အချိန်မှီပိုစ့်မတင်ပေးနိုင်တာခွင့်လွှတ်ပါ။ factory reset ၀င်လို့လည်းမရဘူးလုပ်ပါအုန်းဆိုလို့ ဒီပိုစ်လေးကို အခြားအားလုံးအတွက်ပါတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Reset Samsung Galaxy Ace2I8160 with Hardware Key Button
1) ပထမဆုံး Battery အားကို 70% လောက်ရှိပါစေ။
2) အရေးကြီးတဲ့ data /တွေမှန်သမျှ backup လုပ်ထားပါ။
3) Turn off The Samsung Galaxy Ace2I8160.
4) ပြီးရင် Volume Up Button + Home Button + Power Button
5) Wipe Data / Factory Reset ကို Volume Up/Down button နဲ့ကြိုက်ရာရွေးပါ။
Hard Reset Samsung Galaxy Ace2I8160 with Special secret code key
1) Turn on the Samsung Galaxy Ace2I8160
2) Press or dial : *2767*3855#
3) ဒါကတော့ Samsung Galaxy Ace2I8160 ရဲ့ factory default with secret code key ပါ။
Hard Reset Samsung Galaxy Ace2I8160 with Menu Button
1)Turn on the Samsung Galaxy Ace2I8160
2)Go to Menu Setting
3)Choose: Setting > Privacy > Factory Data Reset
factory ရဲ့ data တွေကို reset လုပ်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး အရေးကြီးတဲ့ data တွေကို backup လုပ်ထား
ဖို့မမေ့ပါနဲ့။ အ၀င်ကော | အထွက်ကော | စာအိပ် | ဖုန်းနံပါတ် နောက်ပြီး ဖိုင်တွေ ဘာဘာညာညာတွေ
I forget Security Screen Lock or Pattern or PIN of Samsung Galaxy Ace2I8160?
Screen Lock or Pattern or PIN စသည်တို့ ၀င်ဖို့နံပါတ်တွေ မေ့နေတယ်ဆိုရင် enter the Gmail account password , ဒါတောင် enter the Android မရဘူးဆိုရင် master reset the Samsung Galaxy Ace2I8160 နည်းနဲ့လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။
Galaxy Ace2I8160 Performance Run Faster ?
Galaxy Ace2I8160 အသုံးပြုတဲ့လူတွေမှာ performance တွေကအရမ်း slowly ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်
background applications running တွေများနေလို့ပါ။ ဒါကတော့လွယ်ပါတယ် အသုံးမပြုတော့တဲ့ ဒါမှမဟုတ်အသုံးမ၀င်တဲ့ applications တွေကို uninstall လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်ပြန်ကြည့်လိုက်ပါ
performance တွေလုံးဝ default ဖြစ်နေတာတွေရမှာပါ။
နောက်ပိုင်း Samsung Galaxy Ace2နဲ့ဆိုင်ရာတွေထပ်ပြီးရေးသားသွားအုန်းမယ်။
This entry was posted in Samsung galaxy နှင့်ပတ်သက်သမျှ. Bookmark the permalink.
← Digital Life ဂျာနယ် အတွဲ ၂ အမှတ် ၂၉ လေးပါ
Nod32 Username and Password 100% working (25/11/2013) →
One thought on “Samsung Galaxy Ace2I8160 ကို Master Reset to Factory Default / Reset / Pattern or PIN / Reinstall or Restore / Reset or Reboot ဖြေရှင်းနည်း”
အကိုရေကျွန်တော်အကူအညီတစ်ခုလောက်တောင်းချင်လို့ပါ။အကိုကူညီနိုင်ရင်ကူညီပေးပါ။ကျွန်တော့်samsung gt-s5660 က softbreak ဖြစ်သွားလို့ ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲမသိဘု အကိုအဆင်ပြေရင်ကျွန်တော့ကိုပြောပြပါလား။ကျွန်တော့ gmail က yanpaing396@gmail.com ကျေးဇူးပါအကို